दुनियाँमा कोही कसैको आफ्नो हुँदैन, मानिसहरु मलामी जान्छन् त केबल हाजिर जनाउन ! « गोर्खाली खबर डटकम
लकडाउन असारदेखि के के खुल्ने र के के बन्द हुन्छन् ? यस्तो तयारी गर्दै छ सरकार ! हेर्नुहोस्
२. दुख र पी’डामा साथ दिने साथी प्राण भन्दा प्यारो हुन्छ, जुन बेला दुख परेको छ त्यो बेला साथ छोड्छ त्यो एक नम्बरको स्वार्थी हुन्छ ।
३. आजभोलि मिठास खानासँग नडराउनुहोस्, तर मिठास बोलीसँग पक्का ड’राउनुहोस् किनकी त्यहाँ ड’रलाग्दो स्वार्थ लुकेको हुन्छ ।
यो संसारको प्रत्येक मानिसहरुलाई धनी नै बन्ने चाहना हुन्छ । किनभने यदि तपाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनुभयो भने तपाईको शारिरिक, मानसिक, स’वेंगात्मक र अन्य कुराहरुका पनि सबल बन्नुहुन्छ ।
किनभने कसैको हातमा जति धेरै पैसा भएपनि धन , पैसा केही कारणबाट हानी नो’क्सानी भएरै छोड्छ । त्यसैले ज्योतिशी शास्त्रीका अनुसार यी ५ उपायहरु आफ्नो घरमा अपनायो भने तपाईको धन नो’क्सानी हुनबाट बचाउन सकिन्छ , हेर्नुस के के हुन् ?
– र अन्यमा प्रत्येक मंगलबार गणेश भगवान पूजा गरी १०८ पटक मन्त्र जप्यो भने पनि तपाईको जीवनमा हरेक पाइला पाइलामा आउने धन हा’नी नोक्सानीबाट बच्ने ज्योतिशी शास्त्रीहरुले बताएका छन् ।